Aprilia NA 850 Mana iyo Honda NC 700 S DCT Baaskiilado | Mootooyinka buugga la caddaymaha, sawiro, ratings, dib u eegista iyo discusssions
MZ Notes - Philadelphia Riders-Leaks (9542)
Honda rc166 lix dhululubo baaskiil ka 1960 (5632)
Home → Aprilia → Aprilia NA 850 Mana iyo Honda NC 700 S DCT Baaskiilado
19 Jun 2015 | Qoraa: DIMA | Comments Off on Aprilia NA 850 Mana iyo Honda NC 700 S DCT Baaskiilado
Maxaad u beddelaan haddii technology samayn kartaa xajin iyo? Baaskiilado Automatic waxa ay noqonayaan more joogo, laakiin waxa jira ay faa'iido leh, kuwaasoo laga yaabo in si hagaagsan oo foolxumo ku ah? Variator iyo gudbinta dual-xajin marka la barbardhigo.
Qayb weyn oo ka mid ah baabuurta cusub soo saaray suuqa baabuurta ka baxo khadadka shirkii la isugu gudbiyo toos ah.
Stammtisch in ay wada hadal kulul Raaxeysto this leeyahay, sanado mar dambe, oo xadaysan oo ku saabsan xoriyadda ama gearshift axkaamta si dhib laments qof. Saas ma aha ee ka soo horjeeda waa kiiska. Marka la barbar dhigo gudbinta Buugga ballan qaaday faa'iido ah oo casri ah si toos ah u gargaarka iyo raaxo, iyo marka uu ugu fiican in la kordhiyo dhaqdhaqaaqa.
All kuwa abid kexeeyey oo baabuur la isugu gudbiyo ah dual xajin this xaqiijin doonaa xamaasad.
mootooyinka Automatic la baaskiilayda, Si kastaba ha ahaatee jeesi, at ugu fiican, la kulmay shaki by xaddidaadda ah oo dhan "mooto nolosha falsafada" waxaa xataa ku xusan. Laakiin haddii fallaagadii kuwa abid abid arko baaskiil noocan oo kale ah u baxay iyo sida shaqo cajiib ah? Honda ayaa aaminsan in ugu yaraan on isbeddel joogto ah oo aan qalabaysnayn VFR 1200 iyo Crosstourer sidoo kale mooto yar miisaaniyadda.
NC 700 S iyo X, soo baxay si uu kharashka dheeraad ah 1000 euros la isugu gudbiyo toos ah dual-xajin (DCT).
Tani shaki markii hore isku darka arkaan mooto wanaagsan oo leh double-xajin dhaqax lagu soo saaray galay meel oo keliya marka aad eegto ku mooto Honda INTEGRA .
Waxay ku salaysan tahay engine isku mid ah iyo jir-ku-saleysan oo, in la barbardhigo tartanka kaliya in la isugu gudbiyo a classic dual-xajin marsho.
NC The 700 S DCT lagu dibadda nasiib wanaag aan muujin karin xiriirka mootooyinka. Laakiin tani istaraatijiyad hybrid cusub oo cusub oo u dhexeeya mooto iyo mootooyinka ma aha. Tan iyo markii ay 2007, Mana Aprilia waa in ay blocks bilaabo.
Your 90-degree engine V2 la 839 sentimitir cubic waa ka GP Gilera ah 800 mooto oo ahaa farsamo helay ku dhawaad ​​beddelin.
ratio gudbinta waxaa si joogto ah bedelay drive suunka a. Si fudud u kicin gaaska iyo dhexsocoto habsami leh guud ahaan dalka. Laakiin mid ka mid ah waa, si kastaba ha ahaatee, qaadan rullaluistemadka caag caadiga ah saamayn band ee iibsiga.
Laakiin kuwa hadda uu leeyahay mooto 50-cc sare-revving ah ee hore indhaha iyo dhegaha of daalimiin ah, wayn.
Fikradda guud ee Mana la rumeysan yahay iyada oo si faahfaahsan iyo
habboonaanta. cadaadiska A on albabka ah, iyo Aprilia V2 ah ugu yaraan 76 hp qeexnayn awood crankshaft socday xoog.
In soundscape this ninna u maleeyo mooto. Arag, Mana ka dhigaysa gebi on taxadirayo Talyaani iyo dareen, dhaadhiciyay sida hagaajin karo by Talooyin yaabo baydal biriig oo cagta iyo kabaalka marsho ee daawashada xoog leh sifooyinka sancada iyo yaab leh sifooyinka wanaagsan.
Guud ahaan, ergonomics ah heer sare, inkastoo xagal jilibka isboorti khiyaano ma aha arrin sax ah, waayo, isteerinka xad sare-dhajinta. Haddii sida mootooyinka mooto waa madadaalo? Sidaas geesi gaaska kor, xajin u culus oo ka tagay in ay isku dayaan in ay ku qasbi xiritaanka.
sprints firfircoon ka hor Aprilia. Constant xawaare joogto ah, motor ka dedejisaa pithy Mana iyo punchy. La yaab ma laha, maxaa yeelay heerka xawaaraha saldhig sare bixisaa Xuddunta Jashiisu yahay waqti kasta oo ka hor ah, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, weheliyay vibrations xoog.
Gargaartay oo dhan gelinba, mid ka mid gebi ahaanba la line ku haboon ka qaban karin. Waayo, 229 miisaanka kg total, Mana ay si raaxo leh ku tuuri kartaa in laabto anfacaya barbaro, ka dibna, dhameeya by fiican shaqeeya Taayirada Pirelli, Istoo'ikiin ah oo deggan Galaatiya ay.
Ka dib markii keliya nus saac drive imtixaanka iyada oo Forest Black, mid ka mid ah la yaabi sida waduhu traditionalist inta aad samayn karto oo aan hawlaha dhabta ah jawaabta lama huraan in ay ku shuban isbedel.
Inkasta oo aan si toos ah aalladda, laakiin amarrada arrin raxan fulinta propulsion gaaska ayaa qeyb muhiim ah. Saddex hababka si toos ah (socdaalka, roob, ciyaaraha) waxaa laga heli karaa oo ku kala duwan yihiin inta badan ee kala duwan ee xawaaraha aasaasiga ah. Yaa doonayo in lagu go'aamiyo saamiga laftiisa, sida la Honda ay gacanta toggle biiro ama baydalka in cagtaada la garanayo ee ka (darsato Honda: 250 Euro) sameeyo.
Marka Mana toddoba saamiga marsho sanyihiin waa sequentially heli karaa. leewarka An in la beddelo masaafada u dhexeysa khafiyad koowaad. Habkaani, si kastaba ha ahaatee, qofna ma u baahan tahay, Variator ku iswaafajinaysaa labadaba markii dardar iyo marka wax xunna ku dhameystay la engine V2 ah.
Xitaa Xuddunta engine jejebiyey waa at ceejinta xiran wanaagsan lugeeyaa. Xanuunsadaa ahaanshaha wadida si hoos saamayn band caag ah? Absolutely ma.
Baynamutaan oo farxad u ah wadida ah sifooyinka Esplanaden halkii qaso.
fargeeto yeellay-down waxaa soco aad u dhagan, iyo hagaajin karo in loader guga iyo lama filaan ah ku celiska aheyd, stage cadaadis aad u hooseeyo. On laami xun uu bilaabo inuu walaaq gooladaha Mana fiican, verhagelt hal line la sii axkaamta. Taasi quruxsan fool xun.
Si kastaba ha ahaatee darana khatar ah waa cod ABS safarada la rakaabka pillion ah. Ka soo fagid ka calipers Brembo radial in hab hal rabidly ee cajaladood oo waaweyn oo dib u la dura gacanta wanaagsan, nidaamka antilock jejebiyey gebi ahaanba ammaan, hawlgalka laba nin ee ka olaleeyan marka biriiga oo aan faragelin darawalka waa mid lama huraan. NC The 700 S DCT si weyn u fiican awoodo.
Laakiin wax ugu horeysay ugu horeysay.
dealer Honda A loo yaqaan engine ee NC si ixtiraam leh in bixinta awood ay dhawr maalmood ka hor sida engine naaftada ah iyo waxa ka dhacay dhidibkii on madaxa. Guud ahaan baaskiilka waxaa loo dhaafay daacad Dhawa. Casriyaynta jimicsadaan, wanaagsan dareemaan.
wax walba Ergonomically waa meel, oo weliba marxaladda joogto ah waa wax qalad ah. Ka dib markii laga bilaabo engine ah, moolka, fog-Weeraryahanka-tiirsan is barbar socda Twin waxyooday goolkiisii ​​deg deg ah: pragmatism iyo frugality.
On dhamaadka handlebar saxda ah ayaad mid ka mid ah laba hababka driving dooran: D hawlgalka caadiga ah, S for yara soc sportier.
marsho koowaad waxaa si toos ah ku hawlan ka dib markii dib u dhac ah. maroojin A taxadir ah ceejinta iyo, Waan ka xunahay, load ka dhigaysa Weeraryahanka u boodboodi aad dhiiriyo. xafiiltanka ee gaadiidka waa sidaas, inkastoo ay 48 hp xoog badnaan ku farxay dhab ah. Pretty cajiib ah sida ay u soomi orodka ka taagan a guulaystaan.
Laakiin magaalada dibaddeeda leh NC tayada ay. Sida ay leedahay Mana sida qol ah kaydinta isticmaali karo in taangiga masaasad for boorsooyinka (in NC ma ku haboon koofiyad fool-buuxa ah, Mana ah).
Waxay sidoo kale si fiican u soco jiifku ay of si weyn u khayr badan Aprilia ah. Athletic, laakiin u ma dhagan cadeeyo ee lama filaan ah, iyo mudacyadeeda, caadiga. kuwan raadkaygay ku socoto si cad u yihiin unexcited sida addoonsada Talyaani ah, iyo manageability ee Honda ah, in ay xarunta hooseeyo ee cuf mahad, iyo in kasta oo miisaankoodu yahay toban kilo si kala duwanaansho caadiga ah ee NC ah 700 S weli waaaweyn.
Xataa at dalcadaha hoose waxa ay weli joogto ah on line lala beegsaday. Oo haddii ay tahay in aad ka buuxay hor qalooca ah qaar ka mid ah, disc bilaabo weeraryahan mar kale si sax ah iyo si ammaan ah iyaga oo gargaar ka ABS dubaridan.
Ciidamada buugan loo baahan yahay, si kastaba ha ahaatee, marka la barbar dhigo Mana ah mid aad u sarreeya.
Oo hadda ka shaqeeya sida la isugu gudbiyo xajin dual? Well, waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday iftiinka iyo hooska. Under joogto ah tababar ku gelinba si toos ah aad si habsami iyo si dhakhso ah sare.
Iyada oo ku xidhan booska ceejinta noqdo xawaaraha dhiganta hooseeyo ama ka sareeya.
kuwan raadkaygay Curvy la markooda dhagan baahan yar samir ka dhammaan kuwa ay si toos ah isku xiro shaqo gargaarka saafi ah oo faa'iido raaxada.
Sababtoo ah mararka qaar badalato off si toos ah, gaar ahaan D-hab, wax yar ka hor qalooca ee booska ceejinta joogto ah weli kor marsho ah, ka dibna Cardiff qalooca markaad codsanayso downshift gaas si toos ah mar.
Tani qasba in sixitaan isteerinka xun. In hab S, qallooca badan waxaa lagu sameeyey si fiican sababtoo ah koorsooyinka asal ahaan yihiin jirsado on.
Laakiin waxa la samayn karaa halkan sidoo kale in si lama filaan ah inta lagu guda jiro dardargelinta tur laabto buuxda mid marsho ka sareeyo, kaas oo keena cuncun at yaraan. darawalka waxaa sidaas loogu yeero inuu la qabsado xaaladahaan ama in ay u baddashaan hab Buugga. Gaar ahaan ka hor gashiga maxaliga ah ayaa lagu talinayaa si ay u loogana this downshift Xuddunta Fariin engine tan iyo marsho lixaad in yar ka badan 60 km / h weli ku hawlan.
Ugu danbeyntii magaalada xidha joogto ah dhibsado, toggling inta badan aan loo baahnayn u dhexeeya koorsooyinka. Halkan waxaa ku qoran Aprilia ah in la raaco wax badan ka raaxo badan iyo kalsooni wadarta hantida ay, gaar ahaan Sokeeyaha raaxada beero. On dhibcood laakiin Honda ku gooyaaba sabab u ah kharashka dayactirka hoose iyo isticmaalka shidaalka yar u badiyeen.
More ka this category
Aprilia SportCity One 50 & 125 Motor mooto Guide
Aprilia RSV4 R APRC Farsamoyaqaan Race Baaskiilado, accessories, dhar, qaybo
Aprilia RSV4 APRC: tartan ka xoog
Brammo Enertia Moto Guzzi 1000 Daytona duritaanka Suzuki B-King Final string Ducati Desmosedici GP11 Ducati Diavel Suzuki Colleda CO Honda Goldwing noocooda M1 Bike Kawasaki ER-6n Royal Enfield rasaas 500 classic Bajaj Baro Honda DN-01 Automatic Sports Cruiser Fikradaha Honda DN-01 Aprilia Mana 850 Suzuki AN 650 eScooter smart Honda X4 Low Down MV Agusta 1100 Grand Prix Suzuki B King Fikradaha Harley Davidson-Janumet 1200 Fikradda In mooto Honda Indian Chief Classic Bike Kawasaki Square Afar Ducati 60 mootooyinka Honda Dream Kids Dokitto KTM 125 Fikradaha Race